Ilungelo elilodwa lomenzi elitsha lisisondeza kwi-iPhone eneTouch ID kwiscreen | IPhone iindaba
I-patent entsha ibonisa umdla we-Apple wokufaka i-ID ye-ID kwiscreen se-iPhone
Iqhosha lasekhaya le-iPhone lelo liqhosha elithanda abanye kunye nabanye. Kwelinye icala, iqhosha lasekhaya belijikeleze okoko i-iPhone yoqobo kwaye liyinxalenye eyahlukileyo yalo; kwelinye icala, elo qhosha lelinye labo linoxanduva lwefowuni enkulu ukuba ibinkulu xa kungafuneki. I-Apple inokuyisusa, kodwa ukusukela ngo-2013 ukhona omnye umqobo: a IDA Esebenza ukusichonga, ukuvula i-terminal kunye nokwenza intlawulo nge-Apple Pay, phakathi kwezinye izinto. Kodwa, ukuba sinikela ingqalelo kumalungelo abenzi abhalisiweyo, ukubonakala kweqhosha lokuqala kunokuba neentsuku zalo.
I-Apple iboniswe ngo-Matshi wonyaka ophelileyo patent oko kungavumela ukushumeka kwe-ID yokuChukumisa kwiscreen sesixhobo, kodwa izolo bapapashe enye echaza ngokuthe ngqo. I-patent entsha ichaza iitekhnoloji ezintathu ezahlukeneyo ezinokusetyenziselwa izixhobo zeminwe zeminwe. Ubuchwephesha besithathu obuchaziweyo bubizwa ngokuba yi "Ultrasonic Imaging" kwaye iya kuvumela inzwa ukuba ingene kwiscreen, ngelixa ibonelela ngobuntununtunu (kunye nokhuseleko) kuneTouch ID esiyisebenzisayo namhlanje.
U-Apple ufuna ukumilisela i-iPhone ene-ID yokuChukumisa efakwe kwiscreen
Ilungelo elilodwa lomenzi lichaza kwakhona indlela isivamvo somnwe somnwe (okanye isixhobo sokuchonga somntu -BPID-) sinokusetyenziselwa qinisekisa ubunyani bedatha. Umzekelo, inokusetyenziselwa ilayisensi yomqhubi, into ethi, inomdla, sele bevavanya ukuquka isicelo seWallet eGreat Britain.
Amanye amarhe athi iPhone 7 izakuquka esi sikrini, kodwa kum oku kubonakala kungenakwenzeka okanye kungenakwenzeka. Uninzi lwamahemuhemu kunye nohlalutyo lunethemba kakhulu kwaye okwangoku sisezinyangeni zonyaka apho siza kufunda khona amarhe amaninzi angazukubona ukukhanya, ubuncinci kulo nyaka. Ewe, enamalungelo awodwa omenzi wechiza asele eyixabisile, ukuba sibona i-iPhone ene-ID yokuChukumisa kwiscreen yinto nje yexesha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » I-patent entsha ibonisa umdla we-Apple wokufaka i-ID ye-ID kwiscreen se-iPhone
Oko kuya kuba linyathelo. Ndiyathemba ukuba bayalwenza olo tshintsho, nangona ndingacingi ukuba bazakuyenza kunyaka olandelayo. Ukubulisa
Phendula ku JefeNet
Intle sele ndiyithenga !!
Ngokuka-Apple, inani le-iPad Pro echaphazelekayo yi-Error 56 lincinci kakhulu
UHabemus Paella Emoji! Ukufika kwakho okulandelayo kuqinisekisiwe